Volana mampirehareha mahatsiravina: Mpanoratra / Tale / Mpikatroka ND Johnson
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Volana mampirehareha mahatsiravina: Mpanoratra / Tale / Mpikatroka ND Johnson
Vaovao Mahafaly Fialam-bolyHorohoro LGBTQ
by Waylon Jordan Jona 10, 2021
Mpamorona horonantsary avy any Atlanta ND Johnson dia zavatra maro. Ilay mpanoratra sady talen'ny transfem mainty dia nahagaga ahy tampoka fa gaga aho rehefa nipetraka niresaka tamiko tao amin'ny firaketana ny Horror Pride Month 2021 izy ireo.
Amin'ny ankabeazan'ny resadresaka ifanaovana, indrindra raha olona tsy dia fantatrao tsara ny asany, dia misy ny fatra-pahafantatra anao izay ahalalanao ny fifankatiavana fotsiny. Tsy miaraka amin'ny ND.
"Nieritreritra ny hevitry ny filokana ho safidy aho," hoy i Johnson. “Hoy ny olona: 'Nisafidy ny hilahatra ianao. Nisafidy ny ho pelaka ianao; nisafidy ny ho ianao na ho izao. ' Mieritreritra aho fa nisy ny safidy. Heveriko fa tsy nisafidy ny ho lasa olona na iza aho fa nifidy ny fahasambarako. Nisafidy ny hifoha maraina aho ary hijery ny fomba tiako ho bika sy hahatsapa izay tiako ho tsapa ary ho lasa olona tiako ho tonga ary tsy hamela ny hevitry ny hafa na ny fitsarana na ny toe-piainana ara-tsosialy aho manapa-kevitra izay handeha ho ahy aho. ”
Manana ny saiko ianao.
"Ny nofinofy amerikana dia miorina amin'izany," hoy hatrany izy ireo. “Mifanaraka na maty, ary aleoko maty. Vonoy ny fanarahana ahy. Tsy manampy olona izany. Heveriko ihany koa fa tsy manampy ny olona mahitsy izany. Mahatsiaro ho toy ny mahitsy aho, na ny filana manaraka an'io fiheverana ny mahitsy io, dia namono ny vondrom-piarahamonina. Namono olona maro hatrany izany. Tsy tafiditra amin'izany aho. ”
Tamin'io fotoana io, fantatro fa efa hanana ny iray amin'ireo resaka marina indrindra isika tamin'ny taona, ary tena teto aho.
Ankehitriny, ny mpankafy mampihoron-koditra rehetra dia manana fotoana iray, mazàna amin'ny sarimihetsika, izay nahatonga azy ireo ho mpankafy horohoro. Io ilay fampitahorana voalohany; ny fotoana voalohany nilatsahan'ny hatsiaka ny hazondamosiko ary mahatsapa zavatra mitovy amin'ny loza ianao.
Amin'ity Johnson ity dia mitovy amintsika rehetra, ary ilay mpanatontosa sarimihetsika dia nahatadidy fotoana vitsivitsy tamin'ny fahazazany tany am-piandohana rehefa nahatsapa an'io izy io. Haingam-panondro haingana izy, na izany aza, fa tsy nisalasala mihitsy izy hoe voaro, indrindra fa noho i Neny.
“Tadidiko fa nijery aho The Ring tamin'izaho fito taona teo ho eo, ”hoy i Johnson tamiko. "Natahotra be aho sao hivoaka amin'ny fahitalavitra ilay zazavavy ary haka ahy ary ny reniko dia nijery ahy ary nilaza hoe, 'Raha miditra ao amin'ity trano ity izy dia diso ny renin'ny reny. Ary fantatro fa hiaro ahy amin'ny sarany rehetra ny reniko. Fantatro fa salama tsara aho tamin'izay. Toy ny hoe tonga tao an-tranoko izy, dia nanao hadisoana. ”
Fotoana kely taty aoriana dia hitan'i Johnson ilay voalohany Halloween sambany, ary tsara… mety ho nila toky bebe kokoa izy ireo.
Ho an'ny mpanatontosa sarimihetsika amin'ny ho avy dia tsy ny fahitan'i Michael Myers ny tsy fahafahany ho faty na ny fahasahianany nanatanterahana ny famonoana azy. Tsy toy ireo mpiara-belona taminy toa an'i Freddy Krueger, mpamono olona mangina i Myers manenjika ny rembiny ary namofompofona nofy ratsy taorian'ny fijerin'i Johnson voalohany.
"Izany no tiako ny horohoro," hoy izy. “Heveriko fa ny mampihoron-koditra dia fomba iray tsara handinihana ny tahotra sy ny lesoka, fa izahay koa… ny fiheverana ny olona mety tsy ho teny mety, fa mandray anjara be loatra aminay isika. Ny horohoro dia miteraka tontolo iray ahafahanao mamindra ireo zavatra ireo. Azonao atao ny mijery azy ireo sy mamakafaka. Maizina ny zanak'olombelona. Toy ny, tsy ny olombelona ihany no manao zavatra maizina, fa ny olona kosa manao zavatra maizina tokoa. Sarotra ny mahatakatra izany amin'ny zava-misy mahazatra. Noho izany, ity karazana ity dia mamela antsika hijery ireo zavatra ireo. ”
Rehefa nihalehibe i Johnson dia tonga ny fotoana hanombohana fanapahan-kevitra momba ny ho avy. Ankizy nilaza tena ho teatra, nibanjina ny maha mpanoratra tantara an-tsehatra sy manoratra mozika azy, saingy nanana olana iray izy. Ny heviny maro dia toa lehibe loatra amin'ny sehatra iray. Na dia mbola te hanoratra mozika sy hiasa amin'ny teatra aza izy dia nisy tsy fitoviana tsy azo lavina tamin'ny horonantsary niresaka taminy ary vetivety dia handeha ho any amin'ny University of North Texas any Denton izy hianatra.
Rehefa nahavita ny diplaomany izy dia nanapa-kevitra fa any Atlanta tokoa no toerana tiany hisy. Ny masony dia nibanjina ny Savannah College of Art & Design ary, dia nivarotra izay rehetra azony natao izy, nanangona ny fananany ary niara-nifindra tamina zanak'olo-mpiray tam-po taminy tany Atlanta rehefa niomana tamin'ny asa grad.
Tamin'izay no nisaraka ny zava-drehetra.
"Nahazo asa tao amin'ny Waffle House aho ary niasa tao nandritra ny enim-bolana teo mandra-paha tsy zakako intsony", hoy izy ireo. “Avy eo aho niditra tao amin'ny fandaminana teto. Nahavita andiana fiofanana momba ny sarimihetsika sy mpiara-miasa amina filma aho hatramin'ny fananganana hatramin'ny marketing nomerika ka hatramin'ny PA amin'ny filma. Ity no fanapahan-kevitra tsara indrindra azoko raisina, ary farany te-ho akaikin'ny olona mainty hoditra aho ary toa foiben'izany i Atlanta. Ka efa telo taona teto aho ary nanao sarimihetsika. Ataoko izy ireo ny fomba sy ny fotoana tiako anaovana azy ireo. Izay rehetra nokasaiko hatao dia nitranga avokoa. ”
Izany dia nitondra an'i ND Johnson hatramin'izao izay niasany tamin'ny fanaovana sarimihetsika mitondra ny lohateny mamy izay novolavolainy avy amin'ny horonantsary porofom-panadihadiana fohy misy an'io lohateny io ihany izay manao fihodinana amin'ny fetibe amin'izao fotoana izao.
mamy manjavozavo tsipika karazana, mifanandrina amin'ny fifandraisana misy eo amin'ny lehilahy sy ny transfems. Ilay hevitra dia izy efa hatramin'ny nankanesany tany amin'ny oniversite, saingy tsy afaka nanatanteraka azy satria tsy nanaiky ny sarimihetsika sy ny hafany ireo mpiara-mianatra aminy.
"Tetikasa mangataka holazaina io, indrindra ho an'ny olona izay matetika miresaka an'io lohahevitra io amin'ny fiainako manokana," hoy ny fanazavan'i Johnson. “Te hahita tantara tsy dia hitako aho. Ny ankamaroan'ny fitantarana manodidina ny fandikana dia manodidina ny fanaovana firaisana fotsiny na fiankinan-doha amin'ny zava-mahadomelina na fanararaotana ao an-trano sy herisetra izay niafarany maty tamin'ny farany na nilalao faty izy ireo Lalàna sy filaminana ny fananana lehilahy cis-hetero hampidi-doza azy ireo. ”
Noho io antony io, hoy i Johnson, dia tsy voasarika izy amin'izao fotoana izao hiasa amin'ny studio izay olona be loatra no mandray fanapahan-kevitra momba izay tokony hatao sy tsy tokony hisy ny sarimihetsika.
"Raha avelako hipetrahan'ny studio ny tanany, dia te-hanova azy ireo izy ireo," hoy izy. “Miaraka amin'i mamy, tetik'asa tena miavaka ho ahy izy io. Izaho dia namorona tetikasa taloha izay nilazako tamin'ny tenako fa tsy afaka mahatsapa izany. Omenao ny olon-kafa izany mba hamoronana ny fahitany. Ianao vao nanoratra azy. Tsy te hanao an'izany aho. Ahy ity.
“Ny tiako ho hita dia ny olona trans mainty izay maherifonay manokana amin'ny tantarantsika. Tiako ny tovovavy farany. Tsy hitako izay antony tsy ahafahany mainty sy trans. Te hifanatrika amin'ireo zavatra nifanatrehana nandritra ny taona maro aho. Misy herisetra an-taonina fotsiny ho an'ny fandehanana manodidina ny maha-ianao anao vehivavy trans. Narahina nody aho. Nalaina am-bavany tao amin'ny trano fidiovana aho.
“Ny tiako hatao amin'ity horonantsary mampihoron-koditra ity dia ny fampisehoana ny ataon'ny olona, ​​fa koa mba hampirisihana ny olona mpandika hafa hijery hafa ankoatr'izay. Mianatra miaro tena. Ampianarina isika hitady fiarovana amin'ny lehilahy fa rehefa izy ireo no miteraka fahavoazana inona no tokony hataontsika? Mandrehitra jiro izany. Te hitrandraka bebe kokoa an'izany aho, saingy amin'ny farany, tena mianatra ny hikarakara tena. Rehefa manana ny fotoana mampihorohoro anao ianao, alao antoka fa hahita ny ampitso ianao. Betsaka ny ankizivavy tsy mbola nanao an'izany. Ny ampahany amin'izany dia satria tsy nampianarina hiaro tena mihitsy isika. Ny fitantarana toy ity dia afaka manampy amin'ny famolavolana izao tontolo izao. ”
Ny mahatsikaiky dia, heveriko fa efa nanao izany i ND Johnson. Raha mila fanazavana fanampiny momba mamy, ilay horonan-tsary, KITIHO ETO.
Volana mirehareha mahatsiravinaHorohoro LGBTQND JohnsonPrideWaylon Jordan
JEREO: Ny horonantsary 'Fear Street Trilogy' an'i Netflix dia mametraka horohoro eo alohany sy eo afovoany
Darren Lynn Bousman napetraka hitarika horonantsary mampihoron-koditra 'LaLaurie Mansion'